About us - Renqiu Isixeko Shuangkun Machinery Izahlulo Co., Ltd.
Isixeko saseRenqiu iShuangkun Machinery Parts Co., Ltd.
Yasekwa ngo-1995, Isixeko saseRenqiu iShuangkun Machinery Parts Co., Ltd. ngumenzi wobuchwephesha kunye nelithumela ngaphandle elichaphazelekayo kuyilo, uphuhliso kunye nemveliso sprocket, izixhobo kwaye esisangqa.Ukuze wanelise iimfuno zabathengi, setha iRenqiu Yizongxi Trading Company ukunceda abathengi bathenge amanye amalungu esithuthuthu. Zonke iimveliso zethu zithobela imigangatho esemgangathweni yamazwe aphesheya kwaye zixatyiswa kakhulu kwiimarike ezahlukeneyo kwihlabathi liphela.
Ukumboza indawo ye-15000 yeemitha zesikwere, ngoku sinabasebenzi abangaphezu kwe-120, siqhayisa inani lokuthengisa lonyaka elidlula i-USD yezigidi kwaye ngoku sithumela ngaphandle i-80% yemveliso yethu kwihlabathi liphela.
Amaziko ethu axhotyiswe kakuhle kunye nolawulo olukumgangatho ophezulu kuwo onke amabakala emveliso asenza sikwazi ukuqinisekisa ukoneliseka kwabathengi lilonke, ngaphandle, sifumene isatifikethi se-ISO9001.
Ngenxa yeemveliso zethu ezikumgangatho ophezulu kunye nenkonzo ebalaseleyo yabathengi, sizuze inethiwekhi yentengiso yehlabathi efikelela eYurophu, eMzantsi Melika, mpuma Asia, kuMbindi Mpuma naseAfrika.
Sinokukunceda ukwenza ishishini lakho libe ngcono.
SHUANGKUN ixhasa impumelelo kubathengi bethu kunye nabameli ngokunikezela nge-sprocket esemgangathweni kunye nezixhobo kwangexesha nangendlela enesazela, kunye nokugcina ubudlelwane obunokuthenjwa nobunembeko kumaqabane ethu.
Inkonzo yokuthengisa kwangaphambili: Udibaniso lweshishini oluhlanganisiweyo kunye nenkonzo yoyilo yasimahla. Ukubonelela ngeemveliso ezahlukeneyo ezisemgangathweni kubathengi kunye nokunceda abathengi ukuba bafumane esona sisombululo sisisiseko kumava ethu entengiso
Phantsi kwenkonzo yesivumelwano: Ummiselo ngokungqongqo wolawulo lomgangatho we-ISO, ukuhanjiswa kwangexesha, ulungiselelo lwamalungiselelo okhuseleko kunye nenkxaso elungileyo yezemali.
Inkonzo yasemva kwentengiso: Siza kuthatha i-100% ngenzondelelo ukusombulula kunye nokwenza isigidi sephoso esinokubakho ngexesha elifanelekileyo.
Konke esikwenzayo, ukunciphisa ukuthenga kwakho kunye neendleko zokugcina, kunye namandla akho kukhuphiswano lwentengiso lwasekhaya. Inkonzo epheleleyo ye-SHUANGKUN, iya kukugcinela umthwalo omninzi kwaye ikuzisele amava amyoli.
Inkonzo yeVIP yakho
1. Akukho odolo lincinci, akukho mthengi mncinci, wonke umthengi ngumthengi weVVVIP kuthi.
Ayisiyomthengi kuphela kodwa neqabane leshishini. I-SHUANGKUN iya kubonelela ngenkxaso epheleleyo yokwandiswa kweshishini lakho.
2. Inkonzo ekhawulezileyo: 24h inkonzo ekwi-intanethi phendula imibuzo yakho ngexesha lokuqala.
Intelekelelo yeendleko kunye nokhetho ziya kubonelelwa kwakamsinya nje ukuba ufumane isicelo sakho.
Isiphakamiso sobungcali: ngokwemeko yakho yokusebenza, sinikezela ngeendlela ezifanelekileyo zokukhetha kwakho, kwaye sihambelana nokubonelela ngemveliso eyenziwe ngokwezifiso zakho.
4. Unxibelelwano olufanelekileyo: Abasebenzi bezentengiso abafunde kakhulu bonke abaneSiqinisekiso seBanga lesiNgesi (Uvavanyo lwe-TEM4 lwesiNgesi Majors-4 okanye iCET6 yeKholeji yovavanyo lwesiNgesi-6 apha ngasentla).
5. Ngokuqinisekileyo ukuba uthetha isiRashiya, isiFrentshi okanye iSpanish, abaguquleli bethu abakhethekileyo bakunika eyona nkonzo isondeleyo.
6. Amava oShishino: Yonke intengiso enamava angaphezulu kweminyaka emi-3 yokuthumela kwelinye ilizwe, eqhelene nomgaqo-nkqubo wokuthumela ngaphandle kunye nenkqubo yokungenisa elizweni, ikunceda wenze ukucoceka kwesiko kunye nenkqubo yokungenisa kakuhle.
Ukusukela ekusekweni kwayo, inkampani iqhubeka ngokuphila ngokukholelwa koku: "ukuthengisa okunyanisekileyo, eyona mgangatho ubalaseleyo, ukuqhelaniswa nabantu kunye nokuzuza kubathengi."
Sijonge phambili ekwenzeni ubudlelwane obunempumelelo kwezoshishino kunye nabathengi abatsha kwihlabathi liphela kungekudala.